Zava-dehibe loatra hoy izy ny fandraisan’andraikitry ny vehivavy na amin’ny resaka sehatra fitsaboana na amin’ny sosialim-bahoaka. Rehefa atosiky ny fitiavan-tanindrazana ny olona anankiray dia tsy tafandry mandry ary manao izay ho afany rehetra hanatanterahana ny asa fampandrosoana ny firenena. Nanambara ity kandida depiote ity fa tsy ilaina ny mifampiandriandry fa maika loatra ny fampiroboroboana ny toekaren’i Madagasikara satria tena latsaka ambany. Manana anjara lehibe amin’izany ny vehivavy rehetra hoy izy ary tokony hanana finiavana mba hanavotana ny firenena. Ny solombavambahoaka dia tsy maintsy mitatitra sy miezaka mandresy lahatra ny tompon’andraikitra mba hiteraka fampandrosoana eny amin’ny toeram-piadidiany. Maro ny manao kobaka am-bava fotsiny, hoy izy saingy tsy adala ny Malagasy ka tsy hahay hanavaka ny vary sy ny tsiparifary.